Achọrọ m na-amalite iche maka akụkọ. Ebe ọ bụ na mmalite nke oge e nwere ụfọdụ nkịtị themes na-agba ọsọ site anyị akụkọ. Anyị nwere ịhụnanya akụkọ, comedies, na ọdachi - ma ọ bụ ngwakọta nke ndị nile dị otu a maara dị ka ihunanya ntochi. Ma gafee niile ndị dị iche iche nke fim, e nwere abụọ themes na fọrọ nke nta mgbe egosi elu: ọma na ihe ọjọọ.
Chee echiche banyere ọkacha mmasị gị na fim. na Braveheart, Scotland na William Wallace dị mma, mgbe England na King Edward dị njọ. Na ihe emere n'ubọchi nke Narnia ụmụaka na Aslan dị mma, na amoosu bụ ihe ọjọọ. Ọbụna Disney fim, nke a bụ eziokwu. na Aladdin, Aladdin na Genie dị mma, ma Jafar ọjọọ. Adịghị eme ka ị na-amaghị banyere Aladdin.
Gị mgbe niile na-achọ ezi n'akụkụ iji merie na ọtụtụ mgbe ha na-.
Ya mere, mgbe anyị na-amalite ikwu okwu banyere Jesus na mgbe anyị na-amalite ikwu okwu banyere Chineke ndị mgbe ụfọdụ na-eche na otu ige. Ha na-eche nke eluigwe na ala dị ka a w agha n'etiti Chineke na Ekwensu. Na dị ka ihe niile anyị na ọkacha mmasị akụkọ, anyị na-atụ anya ọgwụgwụ ịhụ na-atọ. Bụ Jesus nnọọ ihe…
N'ihi na ndị gị bụ ndị na mgbe hụrụ na video maka m song "The Invasion (dike)” Lee ya ebe a. enwe! M na-atụ ya enyere gị aka ịnọgide anya gị na Christ.